'कोरोनाको नाममा कालोबजारी गरे हस्तक्षेप गर्छौं'
‘कोरोनाको नाममा कालोबजारी गरे हस्तक्षेप गर्छौं’
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तरुण विभागका प्रमूख शंकर भण्डारीले कोरोनाको नाममा कालोबजारी गराए कांग्रेस तरुणले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तरुण विभाग प्रमूखमा हालै नियुक्त भएका नेता भण्डारीले लाजिम्पाटको एक होटलमा प्रेस मिट गरी उक्त चेतावनी दिएका हुन्।
भण्डारीले भने, ‘यो संकटमा खाद्यन्न अभाव हुने आँकलन गरिएको छ। पसलहरुमा कस्तो किसिमको गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यसको सुक्ष्म अवलोकन अब कांग्रेसका तरुणले गर्नेछन्। हामी सरकारलाई सूचना दिनेदेखि हस्तक्षेपसम्म गर्न तयार छौ। कालाबजारीका सामान जफत गरी सरकारलाई बुझाउँछौं।’
कोरोना संकटबाट बच्न सरकारले औषधि र खाद्यान्न आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ? जनताको सुरक्षाको लागि खाद्यन्नको जोहो छ कि छैन? आपूर्तिको व्यवस्था कस्तो छ’, नेता भण्डारीले भने, ‘यस विषयमा सरकारले तत्काल कदम चालोस्। सरकारले उचित व्यवस्थापन नगरे चरम मुल्यवृद्धि हुने देखिन्छ। समयमै सरकार गम्भीर भएन भने यो विषयले संकट उत्पन्न हुन सक्छ।’
उनले देशभरका तरुणलाई कालाबजारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे। भने, ‘तरुण साथीहरुलाई काही कालोबजारीको अवस्था नआओस्। ७७ जिल्लाका साथीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। जनताको अधिकारका लागि यो आवश्यक छ। वैमानी गरेमा तरुणले सशक्त भूमिका निभाउँछ।’
सरकारले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा खासै चासो नदिएको आरोप लगाउँदै भण्डारीले यसको लागि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नसमेत पछि नपर्ने बताए। कोरोनाबारे सचेतना फैलाउन छलफल गरी तरुण अघि बढ्ने उनले बताए। तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले पार्टीको निर्देशनअनुसार तरुण दल चल्ने र कोरोना संक्रमणबारे सचेतना फैलाउन तयार रहेको बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उमेदवारी दर्ता